Hargab - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Hergab)
Hargab sidoo kale loo yaqaano Duray (Af-Ingiriis: Flue ) waa xanuun ku dhaca dadka kaas oo uu keeno fayras khatar badan, oo lagu garto qandho, qarqaryo, san-durdur, san cabbur, hindhiso, madax xanuun, caajis iyo murqo xanu. Iyo murugo aad iyo aad u weyn. Drake ku dhufso in that case
Hergabku inta badan wuxuu dadka ku dhacaa xiliyada cimiladu qaboowdahay ama roobaabiga ah.
1 Kala duwanaanshaha HArgab iyo Ifilo
1.1 Ka hor-taga hargabka
2 Daawada Dabiiciga ah ee Hargabka
Kala duwanaanshaha HArgab iyo Ifilo[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Hargabka Bacdamaa ay jiraan boqolaalo fayrusyo ee keeno hargabka, waxaa suurto gal u ah carruurta inay qaadaan hargabyo iska dabo xiga. Waxay hargabyada caadi ahaan yimaadaan xilliga jiilaalka, markii ay dadka waqtigooda ku qaadanayaan gudaha guriga. Waxay sababtaan tahay inay fayrusyada hargabka si aad u fudud ugu faafaayaan meelaha qandaca ah oo oodan. Waxay xittaa kululaysta qalalinaysaa xidaddada yar-yar ee sankaaga, oo u ah difaaca ugu muhiimsan ka hortagga fayrusyada. Waxaa hargabyada layskugu soo gudbiyaa qunfaca, hindisidda iyo hadlidda. Haddii aad soo neefsatid qiyaas yar oo hawo ah ee ku jira fayrusyo, waxaad qaadi kartaa fayruska. Waxay kale oo ay hargabyada ku faafi karaan markii qof buko taabto sheey, sida gacan-qabsiga lagu furo albaabka ama telefoonka. Waxaa calaamadaha lagu garto hargabka ka mid ah sanko oo xirmo ama da’o, hindisidda, dhuun-xanuun, qunfac, xumad yar iyo daalid, waxuuna caadi ahaan ku dhammaada 2-14 maalin gudeheeda. Waxaad cudurka gudbin kartaa laga soo bilaabo maalinta koowaad ay calamadahaada soo baxan ka hor ilaa afar maalin ka dib markii ay dhammaadaan. Waxuu jirka cunuggaaga la dagaalamayaa hargabka isaga oo la daawaynin laakin waa inaad hubisaa inuu cabo dareere badan. Paracetamol-ka waa xanuun-dile waxuuna ka caawinayaa inuu kaa dhimo xumadda. Waxaa carruurta u heli kartaa nooca shiroobada ah.
Ifilo Waxaa ifilada (durayga) keeno fayruska influenza. Waxuu ku soo gudbaa oo keliya xiriir-taabasho oo lala yeesho qof buko, ay ku jiraan waxyaabaha ay taabanayaan, ama dhibacyada ka soo tifqaayo qunfacooda iyo hindisiddooda. Waxay ifilada keeni kartaa xumad sare (ka sareeya 38.3°C ama 101.0°F), jar-jarayn, madax-xanuun, cuntada oo laga go’o, qunfac iyo daalid. Carruurta qabo ifilada weey matagaan waana shubmaan. Ifilada ma laha daawo sidaas darted waa inaad xannaanaysataa cunuggaaga. Waa inay aad u nastaan iyo qaataan dareere badan si aysan u biiyo-bixin. Waxaa loo isticmaali karaa paracetamol-ka in lagu yareeyo xumadda waxuuna yahay xanuun-dile. Waa inaan la siinin aspirin carruurta.ka yar 10 jir Waxay daawada sanka furto kaa caawinayaan inay furan sanka xiran iyo dhuunta. Waa inaad waxii talo ah waydiisaa farmashiistahaaga.
Ka hor-taga hargabka[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Qoraaloan waxaad qorey anigoo ah modamed alamaas from balibusle Si buuxdaa kama difaaci kartid carruurtaada hargabyada iyo ifilada, laakin waxaad ka caawini kartaa inaad ka yaraysid fursadaha ay ku qaadaan fayrusyada. Waxaad hubisaa inay carruurtaada iska dhaqaan gacmahooda. Waxay sidaan ka yaraynaysaa fursadda ay fayrus ka qaadaan waxyaabo uu taabtay qofka buko. Haddii hal ka mid ah saaxibadooda uu qaaday hargab ama ifilo, ku dhiirigeli inay ku ag ciyaarin inta ay ka soo fiicnanayaan. Haddii caafimaadka carruurtaada sareeyo, waxuu jirkooda u muuqanayaa inuu iska celin karin hargabka iyo ifilada. Hubi in cunuggaaga oo u hurdo si ku filan oo ayna cunaan cunto miisaaman oo leh miro iyo khudaar badan. Waxaa muhiim ah quraac habboon inay helaan ka hor intaysan bilaaban maalinta dugsiga Haddii uu cunuggaaga qabo hargab, waxaad bartaa inuu daboosho afka markii uu qufacaayo ama uu hindhisaayo, iyo inuu isla markiiba tuuro warqadaha uu isticmaalay. Waxuu kani ka caawinayaa inay ka yaraato halista u hargabkooda ama ifiladooda ku faafo dad kale.
Daawada Dabiiciga ah ee Hargabka[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Ogow hergabka looma qaato daawo qallajite "antibiotic" maadaama waxa keeno aysan bakteeriyo ahayn oo uu feyras yahay, badanaa hergabka waa xanuun iskiis iskaga tago, daawooyinka badanaa loo qaatane waa kuwa caawin ah sida qufaca oo la yareeyo, qandhada oo la jabiyo, hindhisada iyo cuncunka sanka ama dhuunta oo la joojiyo.
Laakiin intaa waxaad u daawayn kartaa hab dabiici ah adigoo aadan qaadan daawo.
Waxaan rabaa in waxyaabaha caafimaad ahaan la ansixiyay oo cilmibaaris lagu sameeyay oo la ogyahay qaabka ay hergabka wax uga taraan in aan idin la wadaago, waxaana ka mid ah:
Maraqa khaas ahaan kan digaaga:Cilmibaaris lagu soo daabacay joornaalka "Chest" waxaa lagu xusay in cabidda maraq kulul oo laga sameeyay qudaar iyo digaag la isku kariyay in ay aad u yarayso faafidda ama tarmidda jeermiska feyraska ee hergabka keeno, waxay kaloo xustay dadka joogteeyo cabista maraqa in ku yar tahay in uu hergab ku dhaco! Sanjabiilka:Sanjabiilka oo biyo lagu kariyo, kadibna biyahaa la cabo waxay joojisaa qufaca, cuncunka iyo xanuunka dhuunta, waxay kaloo yaraysaa lalabada, geedkaan oo lagu sameeyay cilmibaaris kala duwan ayaa la isku waafaqay in daawo ahaan loogu adeegsan karo xaaladaha qaar oo uu ka mid yahay "hergabka". Malabka:waa daawada aan ku kalsoon nahay oo cilmibaaris nooga baahnayn oo eebbe noogu sheegay in caafimaad walba uu ku jiro, waxaa cilmibaariyaashu sheegeen in haddii malab iyo liin dhanaan lagu darsado koob shaah oo qandac ah inuu daawo u yahay hergabka, waxay kaloo cilmibaarayaal kale sheegaan oo u badnaa dhakhaatiir ku taqasustay cudurada caruurta in hal qaaddo weyn oo malab ah oo la siiyo caruurta habeenkii marka ay seexanayaan in ay ka hortagto qufaca iyo hergabka, khaas ahaan caruurta qufaca la soo tooso oo ku matago ama cabburmo xilliyada habeenkii, waxaad kaloo halkaan ka akhrisan kartaa faa'idooyinka kala duwan ee malabka iyo xanuuanda lagu daaweeyo: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,3929.0.html Toonta / Tuunta: Toonta ma daaweyso hergabka kaliya ee wayba ka hortagtaa, toonta waxaa ku jiro maaddo la yiraahdo "allicin", maadadaan oo shaqo joojin ku samayso dheecaan feyraska iyo bakteeriyada ay kaga faa'ideestaan in ay xanuuno dhowr ah ku ridaan qofka, xanuunadaas oo ay ka mid tahay Hergabka, marka waxay dhakhaatiirta ku taliyaan in toonta lagu darsado cunnada aadna loo badsado xilliyada uu hergabku badan yahay, halkaan aka khriso qoraal kooban oo ku saabsan faa'idada toonta: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,4605.0.html Vitamin C / Liinta:Liinta, Bambeelmada Iyo oranjada oo ay ka buuxdo fitamiin C-ga waxay yaraysaa san-durdurka iyo hindhisada, qufaca qallalan iyo afqallaylka, waxay fiican tahay markaa shaah kulul ku darsato ama in iyadaba markaa miirato aad qandiciso oo iyadoo qabow ah aadan cabin, vitamin C-ga wuxuu kaloo sare u qaadaa habdhiska difaaca jirka tasoo yaraynaysa in jeermiska fursad u helo jirkaaga oo uu xanuun u sababo, waxaa habboon in aad akhrisato qoraalkaan oo ka hadlayo faaidooyinka fitamiinnada kala duwan iyo cunanda laga helo: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,5781.0.html Biyo cusbo leh:Cilmibaaris lagu soo daabacay joornaalka "American Journal of Preventive Medicine" waxay xustay in lagu luqluqdo biyo diiran oo cusbo leh in ay yarayso fursadda in bakteeriyada ama fayraska ay ku tarmaan dhuunta, waxay kaloo yaraysaa cuncunka dhuunta iyo waxay kaloo jilcisaa xabka, waxay kaloo joojisaa cabburka sanka, waa muhiim in aad caado ka dhigato ku luqluqashada biyo kulul oo cusbo leh haddii aad tahay dadka quumanka ku soo laalaabtaan. Uuminta / Isuumiska:In la isku huuriyo ama la isku uumiyo biyo kulul ama meel diiran waxay yaraysaa awoodda feyraska keeno hergabka, waxay jirka u siisaa awood difaaceed oo uu kaga hortagi karo jeermiska maadaama qulqulka dhiigga uu siyaadayo, unguyada dhiigga cadcad ee la dagaallamo infekshane waxay si dhakhso ah u gaarayaan meesha cilald ay ka jirto oo ah dhuunta, sanka iyo afka.
Way dhici kartaa in ay jiraan habab kale oo aad wax iskaga garatay oo aad u isticmaasho al dagaallanka hergabka, laakiin kuwaan aan kor ku soo xusay waa kuwo ay dadka aad u isticmaalaan, cilmi ahaanne la arakay waxtarkooda.
Ku dadaal in aad raacdid talooyinka dhakhtarkaaga, iska hubi oo baar haddii waxa ku hayo aysan hergab ahayn maadama ay dhici karto in waxyaabo kale ku qaldi kartid. Haddii talooyinkaan kore aad wax iskaga garan waysid la xiriir dhakhtar si laguu baaro.
Maqaalkan waa la bilaabay. Hadii aad wax ka taqaanid fadlan ku caawi Wikipedia in aad Wax ku dartid. Qoraalkaagu ha noqdo mid faa'iido leh oo dhexdhexaad ah.
Txiraac[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Hargabka anaa had a u cuney sanjabiil waana dhoowrayaa unuu Allah igu caafiyo
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hargab&oldid=193152"
Gudaha kuma jirtid
Wax ka bedel
Wax ka bedel xogta
Soo geli file
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 22:10, 28 Juun 2019.